"Ngaphandle kokubhuka", okusha kukaNoe Casado | Izincwadi Zamanje
«Ngaphandle kokubhuka», okusha kweNoe Casado
Emasontweni ambalwa edlule iqale ukudayiswa e- Okusemqoka, ilebula lokushicilela lamanoveli othando nezocansi e-Planeta, okwakamuva ku UNoe Ushadile. Inoveli yakhe entsha, enesihloko esithi Akukho ukubhuka, utshela kumuntu wokuqala impilo eyisidina yowesifazane oguqulwa yindaba engakholeki yothando nobulili obuthandekayo.
I-protagonist, uBea, ngumama osebenzayo onomsebenzi wokudlela ongazizwa ebalulekile kumphathi wakhe. Indaba iqala ngosuku aqala ngalo izifundo zokupheka ukuze athuthuke emsebenzini wakhe, lapho ahlangana khona nomfana onesiphanyeko esihle. Kepha ubudlelwano babo abuqali kahle. Lokhu kungafundwa esahlukweni sokuqala, esibandakanya ubusha baso kanye nemvelo.
Amazwibela athi «Akukho ukubhuka»
Ufakwe esimeni sakhe sokunethezeka, uBea uhlanganisa umsebenzi wakhe njengompheki wendawo yokudlela nempilo yomndeni wakhe. Enesithukuthezi ngokuzidla wedwa, futhi yize ubuciko bakhe bungeke buhlonishwe emsebenzini wakhe, unquma ukubhalisela izifundo zokupheka.
Indoda okuwukuphela kwayo empilweni yayo isizohlanganisa iminyaka emihlanu ubudala futhi ithathe isikhathi sayo samahhala ngokuphelele. Akacabangi omunye umuntu, ngakho-ke izinsuku ziyahamba, ngaphandle kokulindela noma yini ekhethekile, ngaphandle kokubona ukuthi isici sakhe njengomuntu wesifazane sibuyiselwa emuva ekhabethe.
Ucabanga ukuthi usesulile ngakho ukuthi uma enikezwa ithuba eliyingqayizivele lokushintsha lo mkhuba, akazizwa ekwazi ukuzazisa njengoba emfanele.
Yize ... ungamelana kanjani ne-adventure? Kwake kwaba kanye empilweni yakhe, uBea uvala amehlo akhe futhi adedele ukuhamba, yize engahle angakulungeli ukuwavula futhi.
Mayelana Noe Casado
Lo wesifazane waseBurgos uthi ubethanda ukufunda selokhu aqeda isikole samabanga aphezulu futhi bayeka ukumbamba ngenkani. Wahlala emhlabeni wakhe wangasese kwaze kwaba yi-Intanethi nezinkundla ezahlukahlukene zokubhala zasebenza isimangaliso ngokumvumela ukuthi akhulume ngalokho akuthandayo futhi ahlanganyele imibono yami nabanye.
Uma inoveli yokuqala, Isehlukaniso (IMachinist), yabona ukukhanya ngoJuni 2011. Owesibili, Ungangibuki kanjalo (Editora Digital), yashicilelwa ngefomethi yedijithali ngoMashi 2012; unyaka lapho ngibuye ngashicilela khona abaphumelele Ubusuku obungamashumi amathathu no-Olivia (Ubukhulu). Kulebula ledijithali kuvele ama-eBooks eZafiro Ngobumpumputhe y Ngitshele nini, kanjani futhi kuphi.
Ungafunda isahluko sokuqala se- Akukho ukubhuka lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » «Ngaphandle kokubhuka», okusha kweNoe Casado